सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदीप ज्ञवालीलाई
काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालका लागि प्रवक्ताको जिम्मेवारी ज्ञवालीलाई दिएका हुन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने अहिले प्रधानमन्त्री ओली मातहत नै रहेको छ । विभागीय मन्त्री आउन केही समय लाग्ने भएकाले प्रवक्ताको जिम्मेवारी ज्ञवालीको दिइएको हो।
यसअघि प्रवक्ताको भूमिकामा डा. युवाराज खतिवडा थिए । गोकुल बाँस्कोटाले ‘७० करोड घुस लिनेगरी गरिएको फोनवार्ता’ सार्वजनिक भएपछि उनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट राजिनामा दिएका थिए । सो लगत्तै खाली भएको सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री समेत रहेका डा. खतिवडाले पाएका थिए ।
सत्तारुढ दल नेकपाको विवाद मिलाउन मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने कुरा आएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाका लागि सिफारिस गरिसकिएको छ।